Home › What's New › India Myanmar Charity Bazaar 2017
India Myanmar Charity Bazaar 2017
Indian Women’s Association of Yangon (IWAY) will be organizing ​the “INDIA – MYANMAR CHARITY BAZAAR 2017" at Indian House, No.35, Than Ta Man Road (Near American Centre, Yangon), Dagon Township, Yangon on 2nd December, 2017 (Saturday) from 11:00 am to 5:00 pm.
​You are cordially invited to come and indulge in Indian food, games, purchase exotic handicrafts and win exciting raffle gifts like airline tickets to exotic destinations, hotel stay vouchers, jewellery, cruise….Tickets are available at the Embassy of India, Coriander Leaf, India Tadka, Marina Restaurant.
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားအမျိုးသမီးများအသင်းမှ ကြီးမှူးစီစဉ်သည့် “INDIA – MYANMAR CHARITY BAZAAR 2017" (အကျိုးအမြတ်မယူဘဲ လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းများကို လှူဒါန်းမည့် အိန္ဒိယ - မြန်မာ ဈေးရောင်းပွဲတော် - ၂၀၁၇)ကို အမှတ် (၃၅) ၊သံတမန်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Indian House တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ (့စနေနေ့) မနက် ၁၁း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးရောင်းပွဲတော်တွင် အိန္ဒိယအစားအစာများအပြင် အရောင်အသွေးစုံစုံနှင့် နှစ်သက်ဖွယ်ရာကောင်းသေါ လက်မှုပစ္စည်းများကို ပြသရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်လေယာဉ်လက်မှတ်၊ဟိုတယ်တွင်အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ အပျော်စီးသင်္ဘောစီးခွင့် အစရှိသော ကံစမ်းမဲကူပွန်များကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
၀င်ခွင့်လက်မှတ်များကို အိန္ဒိယသံရုံး, Coriander Leaf, India Tadka, Marina Restaurant တို့တွင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဈေးရောင်းပွဲတော်မှရရှိသောငွေကြေးတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့ အစည်းများကို လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အိန္ဒိယဈေးရောင်းပွဲကို ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။